Ukuthethelelwa kwabashadikazi | Bezzia
Kubudlelwano obuningi, lapho kufanele ucele ukuxolelwa noma uxolelane nomunye umuntu Kuyindaba ekhohlisayo evame ukuphela empini noma engxabanweni. Into ejwayelekile ukuthi uma lokhu kwenzeka futhi umbhangqwana unesisekelo esikahle, inkinga ayiqhubeki, kepha ngeshwa akuyona into ejwayelekile le.
Esihlokweni esilandelayo sizokutshela izizathu noma izimbangela zokuthi kungani kunzima kangaka ukuthethelela nokucela ukuxolelwa, ngaphezu kwemiphumela emibi lokhu okuba nayo ngekusasa labashadikazi.
1 Kungani kunzima kangaka ukucela ukuxolelwa
2 Abantu abangazi ukuthi bangamxolela kanjani umlingani wabo
3 Imiphumela yokungazi ukuthi ungaxolela kanjani kwabashadile
4 Ungacela kanjani ukuxolelwa
Kungani kunzima kangaka ukucela ukuxolelwa
Iningi labantu lizizwa lihlaselwa ngumlingani walo uma litshelwa ukuthi lenze kabi. Bazizwa besongelwa ngoba abazethembi kangako futhi ukuzethemba kwabo kubuthakathaka impela.
Esinye isizathu iqiniso lokuthi ubone umhlaba ngendlela eyeqisayo ngaphandle kokwamukela indawo ephakathi nendawo. Kuphakathi kokuthi konke kumhlophe noma kumnyama kepha akunakuba mpunga. Abakwazi ukwamukela noma nini ukuthi banecala ngokuphelele nokuthi lo mbhangqwana ukhululekile kulelo cala.
Laba ngabantu abacabanga ukuthi uma begcina ngokucela ukuxolelwa, kuzofanele bakwenze noma nini lapho kuvela uhlobo oluthile lwenkinga noma ukungqubuzana.
Abantu abangazi ukuthi bangamxolela kanjani umlingani wabo
Njengoba nje kunabantu abakuthola kunzima ukucela intethelelo, bakhona nabanye abakuthola kunzima ukuxolela. Lezi zinhlobo zabantu zinomqondo ongalungile wokuthi kusho ukuthini ukuthethelelwa. Uma umonakalo uxolelwe, awususwanga kwimemori, kepha kuyasiza ukuqeda izindlela zokuziphatha ezingezinhle nezizayo ezingaqeda umbhangqwana.
Ukulimala nokulimala okubangelwa isimilo esithile kwenza umuntu okufanele axolele afune ukujezisa umlingani futhi amenze ahlupheke. Kulokhu, ukuthethelelwa okulindelwe isikhathi eside nokudingekayo kobuhlobo akufiki.
Esinye isizathu esenza ukuthi kube nzima ukuthethelela umlingani wakho Kungenxa yokuthi uzizwa ubuthakathaka futhi usengozini phambi komunye umuntu.
Imiphumela yokungazi ukuthi ungaxolela kanjani kwabashadile
Intukuthelo esabekayo iqala ukuvela okwenza buthakathaka ubuhlobo phakathi kwabantu bobabili.
Kulezi zithandani uchungechunge lwemizwa eyingozi kakhulu luqala ukuvela njengokuthukuthela, intukuthelo, noma ukudumazeka.
Ingxenye engathetheleli ihlala icabanga ngokwenzekile, eshiya ngokuphelele inhlalakahle yalaba abashadile.
Ungacela kanjani ukuxolelwa
Into yokuqala ukuthatha lonke icala nomthwalo wemfanelo ngaphandle kokubeka noma iyiphi i-buts.
Kuhle ukuhlala endaweni ethulile sikhulume ngakho konke okwenzekile. ngaphandle kokubheka imininingwane.
Uzwela lubalulekile lapho ucela ukuxolelwa kumlingani wakho. Kuhle ukuzifaka ezicathulweni zomunye umuntu ukuze uzwe ubuhlungu.
Umuntu kumele anikele ukulungisa isimo ukuze umonakalo owenziwe unyamalale.
Umlingani akumele aphoqwe ukuthi axolele futhi Yinto umuntu okufanele ayenze ngokukhululeka nangokuqonda ngokugcwele.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Psychology nezithandani » Ubudlelwano » Ukuthethelelwa kwabashadikazi
Thola iBloom, iqoqo le-SS21 leCompañía Fantástica